WARBIXIN: UEFA Oo Soo Bandhigtay Kooxaha Horyaalada Yurub Ee Ilaa Hadda U Soo Baxay Champions League Ee Xili Ciyaareedka Cusub Iyo Xog Aad U Baahan Tahay In Aad Ogaato. – GOOL24.NET
WARBIXIN: UEFA Oo Soo Bandhigtay Kooxaha Horyaalada Yurub Ee Ilaa Hadda U Soo Baxay Champions League Ee Xili Ciyaareedka Cusub Iyo Xog Aad U Baahan Tahay In Aad Ogaato.
April 17, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxaha horyaalada Yurub ayaa dagaal xoogan ugu jira sidii ay ugu soo bixi lahaayeen tartanka UEFA Champions league ee xili ciyaareedka cusub ee soo socda waxaana soo dhawaanaya waqtiga si rasmi ah loo wada ogaan doono dhamaan kooxaha xili ciyaareedka 2018/19 ku loolami doona UEFA Champions League balse haddaba waxaa la sii ogyahay kooxo booskooda xaqiijistay.
Horyaalada Yurub ugu waa wayn ayaa UEFA ka haysta saamiyo kala duwan oo kooxaha uga qayb galaya tartanka Champions League iyada oo horyaalada Spain, England, Germany iyo Italy ay haystaan saami min afar kooxood ah waxaana min afartan boos ku guulaysta kooxhaa kaalinta kowaad ilaa afraad kaga dhamaysta horyaaladan.
Waxa kale oo oo heerka groupyada UEFA Champions League si toos ah ugu soo baxaya kooxaha ku kala guulaysta UEFA Champions League iyo UEFA Europa League laakiin xili ciyaareedka cusub ee soo socda waxaa si rasmi ah loo dhaqan galin doonaa sharcigii cusbaa ee ahaa in afarta kooxood ee min kaalinta kowaad ilaa afraad kaga soo baxa horyaalada England,Spain, Germany iyo Italy ay si toos ah ugu soo bixi doonaan heerka groupyada UCL.
Haddaba shabakada Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa xogta kooxaha Yurub ilaa hadda si rasmi ah ugu soo baxay heerka groupyada Champions League ee xili ciyaareedka soo socda iyo waliba kooxaha sida ay hadda u taagan tahay u soo baxsan UCl inkasta oo wali ay rajadoodu ku xidhan tahay kulamada xili ciyaareedkan ka hadhsan.
Ugu horayn horyaalka Spain laba kooxood ayaa si rasmi u xaqiijistay booskooda UEFA Champions League waana labada kooxood ee kaalinta kowaad iyo labaad ku jira ee Barcelona iyo Atlletico Madrid kuwaas oo haddaba xidhay booskooda heerka Groupyada Champions league laakiin Barcelona ayaa marka ay xaqiijisato koobka La Liga sida ay u taagan tahay waxay UEFA go’aamin doontaa in horyaalada kale ee Yurub koox laga soo dalacsiin doono.
Sababtoo ah Barcelona kaalinta kowaad ee La Liga oo Champions League loogu soo baxo iyo ku guulaysiga horyaalka la liga oo isna Champion League loogu soo baxay ayay isku helaysaa taas oo UEFA ku qasbi doonta in tan kaalinta horyalka koox kale oo Yurub ah la siin doono taas oo qiimaynta UEFA ku xidhnaan doonta.
Kooxaha Real Madrid iyo Valencia ayaa sida ay u taagan tahay u soo baxsan heerka Groupyada Champions League ee xili ciyaareedka soo socda laakiin ilaa hadda wali si rasmi ah ugu may guulaysan waxayna sugi doonaan in kulamada soo socda ay dhibcaha sii joogteeyaan.
Kooxda Bayern Munich oo koobka Bundesliga ku guulaysatay ayaa ah kooxda kaliya ee ilaa hadda booskeeda UEFA Champions League ee xili ciyaareedka soo socda xaqiijisatay waxayna ku biirtay liiska kooxhaa Pot1 gali doona marka isku aadka la samaynayo laakiin sida ay hadda u taagan tahay kooxaha Schalke, Bayer Leverkusen iyo Borussia Dortmund ayaa heerka groupyada UCL u soo baxsan balse wali kulamada la ciyaari doono ayaa samayn ku yeelan kara.
Kooxda Manchester City ayaa ilaa hadda horyaalka Premier league ka xaqiijisatay booskeeda UEFA Champions League ee xili ciyaareedka soo socda kadib markii uu ku guulaystay koobkan waxayna sidoo kale City xaqiijisatay in Pot 1 ay ka gali doonto isku aadka heerka groupyada oo ah kooxhaa groupyada hogaamin doona.
Laakiin sida ay hadda u taagan tahay waxaa heerka groupyada Champions League u soo baxsay kooxaha Manchester United, Liverpool iyo Tottenham laakiin saddexdan kooxood ayaan wali booskooda si rasmi ah u xaqiijisan iyada oo kulamada soo socda lagu go’aamin doono.
Horyaalkada Talyaaniga ee Serie A kooxaha Juventus iyo Napoli ayaa si rasmi ah u xaqiijisatay booskooda heerka groupyada UEFA Champions League ee xili ciyaareedka soo socda maadaama oo ay xisaab ahaan heleen dhibcihii lagu soo bixi karayay laakiin sida ay u taagan tahay hadda kooxaha Roma iyo Lazio ayaa soo raaci kara balse iyaga wali booskooda lama xaqiijin.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa markale xalay si rasmi ah u xaqiijisatay koobka horyaalka Ligue 1 waxayna sidoo klae si rasmi ah u xaqiijisatay booskeeda heerka Groupyada UEFA Champions League ee xili ciyaareedka soo socda iyada oo waliba isku hubsatay in Pot 1 ay ku jiri doonto isku aadka ee kooxaha hogaamin doona Groupyada UCL.
Laakiin kooxda labaad ee PSG soo raaci doonta ayaa noqon karta Monaco taas oo xalay bahdilaad wayn kala kulantay PSG laakiin wali booska Monaco ee heerka Groupyada ayaan si rasmi ah loo xaqiijin.
Horyaalka Russia sida ay ilaa hadda u taagan tahay waxaa soo baxsan Lokomotiv Moskva iyo Spartak Moskva laakiin wali si rasmi ah looma go’aamin halka horyaalka Portugal sida ay u taagan tahay ay Porto soo baxsan tahay waxaana markale horyaalka Ukraine ka soo bixi karta Shakhtar Donetsk oo sida ay hadda u taagan tahay u soo baxaysa UCl.
Halkan Si Kooban Ugaga Bogo Kooxaha Sida Rasmiga Ah ugu Soo Baxay Heerka Groupyada UCL ee xili ciyaareedka soo socda iyo kuwa sida ay hadda u taagan tahay soo baxsan iyada oo kooxhaa midabka madow ku qoran ay haddaba si rasmi ah u soo baxeen.
Germany: Bayern München*, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund
England: Manchester City*, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur
Italy: Juventus, Napoli, Roma, Lazio
Russia: Lokomotiv Moskva, Spartak Moskva
Dhamaan kooxaha ku guulaysta horyaalada waa wayn ee Yurub oo ay haddaba ka mid yihiin Manchester City, Bayern Munich iyo PSG waxay si toos ah u galayaan Pot 1 oo ah kooxaha hogaamin doona heerka Groupyada UEFA Champions League waxaana ku soo biiri doona kooxaha ku guulaysta Champions League iyo Europa League iyada oo haddii ay kooxo dhinaadaan ay UEFA qiimaynteeda ku buuxin doonto.
Guud ahaan 24 kooxood ayaa si toos ah heerka Groupyada UEFA Champions League ugu soo bixi doona horyaalada aan soo sheegnay halka labada kooxood ee ku soo guulaysta Champions League iyo Europa League ay ka dhigi doonaan 26 kooxood taas oo la micno ah in 6 boos oo kaliya ay kooxo badan oo Yurub ahi isreeb reebyo dhawr wareeg ah u soo gali doonaan si loo dhamaystiro 32 ka kooxood ee ku tartami doona UCl.
Xogtani waxay ku diwaan gashan tahay April 16,2018 waxaana bixiyay xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA iyada oo marka kulamada soo socda la ciyaaro ayna noqon doonin mid sidan sii ahaan karta maadaama oo kooxaha aan booskooda la xaqiijin ay wax iska badali karaan.